'I-Scream' igcwaliswe ngokusemthethweni, uMqondisi Wabelana Ngesithombe Ne "#ForWes"
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'I-Scream' igcwaliswe ngokusemthethweni, uMqondisi Wabelana Ngesithombe ne- "#ForWes"
'I-Scream' igcwaliswe ngokusemthethweni, uMqondisi Wabelana Ngesithombe ne- "#ForWes"
Scream ekugcineni kuqediwe. Ngemuva kokubamba okuningi ngesikhathi sokuphela kwe-COVID, ekugcineni sesifikile. Le filimu yenziwe futhi umqondisi uMatt Bettinelli uthumele ku-Twitter wakhe futhi wabelana ngesithombe esihle kakhulu ukukhumbula usuku olukhetheke kakhulu.
ISIKRAMU (2022) siphelile! Sijabule kakhulu ukuthi nonke nizobona maduze. #Ngobesizwe
UBettinelli uthumele. Ngokwami, ngisenemizwa yokudlula kukaWes Craven nokuthi yena ubengekho eduze kwalokhu kungena kwe- Scream i-franchise.
Bengihlala ngingumuntu ocabanga ukuthi ukuphela kwebhendi lapho elinye lamalungu eqembu liyeka noma lifa. Isibonelo, unamaqembu athile afana nawo Abashayeli bezindiza zamatshe aseStone futhi AC / DC lokho kuqhubeke ngegama elifanayo ngemuva kokudlula emhlabeni kwabaculi uScott Weiland noBon Scott. Bachitha isikhathi esithile bebheka futhi ekugcineni bafaka omunye umuntu endaweni yabaculi babo abahola phambili. Ngemuva kwalokho siba namabhendi enziwa ngemuva kokuthi kufe ilungu. Iphelile. Ngisho, Abafana beBeastie ngeke ngisho yenza ngaphandle kwelungu labo elahlekile. Ngakho-ke, kungithinta kancane kimi. Futhi ngiyaqiniseka ukuthi angingedwa.
Konke okushiwo, Scream abalandeli bajabule kakhulu ngokungena okulandelayo. Kuyasiza impela ukuthi iqembu ligcine uWes ezinhliziyweni zabo ngenkathi besebenza kwifilimu. Kepha, kukho konke, ngicabanga ukuthi abalandeli beScream bakulungele nje okuningi Scream ngemuva kokulinda isikhathi eside kangako.
Kuyasiza impela ukuthi abaqondisi, uBettinelli noTyler Gilett basabeka ngokumangalisayo, bapholile, bathobekile. Uma kungomunye umuntu okufanele ngabe usebenza ngaphakathi kwesisekelo se-Wes Craven sika-Scream nguBettinelli noGillett. Lawa ma-dude anomugqa omuhle wamafilimu. Kokubili i-Ready noma i-Not ne-Southbound kuyizibonelo ezikhanyayo zokusola okukhulu nokwesaba okukhulu ngomphetho konke okwazo.
Kuhle futhi ukubona izinkanyezi ezibuyayo uDavid Arquette, uCourtney Cox futhi uNeve Campbell ebuya futhi. Ngamunye wabo bonke babona umbhalo, futhi bacabanga ukuthi kwakuyinto ehlakaniphile eyakhombisa ukuhlonipha uWes Craven nomsebenzi wakhe.
“Abaqondisi bayamangalisa, bakwenza ngokuphelele… iyi-franchise entsha. Kuyisinqe, kuyesabeka. Kumemeza nje okusha. Akukona ukuqalisa phansi, akuyona kabusha, kumane nje kuyisethulo esisha sha. Ngicabanga ukuthi kuzoba mnandi kakhulu, ”kusho uCox ngesikhathi sakhe Umbukiso kaDrew Barrymore.
Scream igwaza ingena ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini ngoJanuwari 14, 2022.
Ingabe ukulungele i-Wes Crevenless, Scream? Ngabe ucabanga ukuthi sekuyisikhathi? Sazise esigabeni sokuphawula.
I-Addams Family 2 ibuyisa i-fam futhi iyise eholidini elangeni. Buka i-trailer khona lapha.
I-Courtney CoxUDavid ArguetteDrew BarrymoreI-GhostfaceUMat BettinelliScreamShayela i-2022tyler gillett
IGuillermo Del Toro's 'Nightmare Alley' Ikalwe R
'Izindaba ze-American Horror' Imemezela Uhlu Olunenkanyezi lweThalente Lesikrini